Kingdom Rush Vengeance 1.7.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Kingdom Rush Vengeance
Kingdom Rush Vengeance ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးကအကြီးအစိုးရိမ်ရေမှတ်မျက်နှာပြင်မှထမြောက်တော်မူပြီ! ရှငျဘုရငျ Polyx နှင့်သူ၏ subaquatic စစ်တပ်ကစစ်တိုက်ခြင်းငှါအမှောင်သခင်ဘုရား Vez'nan Join!
အင်အားကြီးတန်ခိုးရှင် wizard ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါသည် Vez'nan! သငျသညျမိမိတပ်စုသိမ်းအဖြစ်မော်ကွန်းခရီးစတင်နှင့်သူ၏ပွေအစီအစဉ်များ ... muahaha ဖြည့်ဆည်း။ အစစ်အမှန်သူဌေးသူဒမ်းပြသနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရယူပါ! သင်အသစ်နှင့်ကောင်းမွန်သောဟောင်းဘုံအောင်နိုင်အဖြစ်သင့်လမ်း Fight ။ အားကြီးသောရန်သူတို့အင်ပါယာရင်ဆိုင်ရနှင့်ဟာသနှင့် Epic အပြည့်အဝကဤဂန္မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအကြီးအကဲတွေဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား!
- 17 အသစ်များကိုတာဝါတိုင်, ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူအသီးအသီး။
- တာဝါတိုင်သင့်ရဲ့လက်နက်တိုက်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်, သင်၏ရန်သူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့အကြီးအကျယ်ပေါင်းစပ်ပါစေ!
- တိုက်ယူဘို့အမှည့်သောသုံးမြေများကိုဖြတ်ပြီး 19 စိန်ခေါ်အဆင့်!
- မဆိုင်းမတွသင့်ရဲ့ command ကိုလိုကျနာပါမညျသူကို 10 အစွမ်းထက်သူရဲကောင်းများ။
- စမ်းသပ်ဖို့သင့်သောကျေးများနှင့်နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုအပေါငျးတို့သထားလိမ့်မည်ဟုအသက် 40 ကျော်သေစေနိုင်သောရန်သူများကို။
- သင်သူဌေးတိုက်ပွဲတွေ၏အရှိဆုံးဒဏ္ဍာရီ3တန်ခိုးကြီးသောရာဇဝငျခေါ်ခဲ့အဖြစ်နိုငျငံတျော Rush!
- သင့်ရန်သူများ vanquish မှနယူးအင်အားကြီးနှင့်စစ်ကူ။
- စစ်တိုက်အတွက်အပိုအစွန်းများအတွက် 10+ trinkets နှင့်အပိုငျးအ။
- သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရန်သင့်တပ်မတော်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ 30 ရက်အဆင့်မြှင့်။
- 60+ အောင်မြင်မှုများ, ဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သင် play နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အပျော်စရာ!
- သင့်အမှောင်မျှော်စင်မှာအဘယ်သူမျှမက Wi-Fi ကို? အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်ရုံအော့ဖ်လိုင်း play!
ဤနေရာတွင်သခင်ဘုရား Vez'nan ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်သတင်းများကိုရယူပါ:
Kingdom Rush Vengeance အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Kingdom Rush Vengeance အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Kingdom Rush Vengeance အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apk-4-free စတိုး 332.99k 93.19M
Kingdom Rush Vengeance ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Kingdom Rush Vengeance အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.7.2
ထုတ်လုပ်သူ Ironhide Game Studio
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.ironhidegames.com/PrivacyPolicy
လက်မှတ် SHA1: FC:43:20:94:5E:52:DD:17:81:BC:E4:E5:9F:E0:4C:46:2C:01:1E:3F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ironhide S.A.
အဖွဲ့အစည်း (O): Ironhide S.A.
နယ်မြေ (L): Montevideo
နိုင်ငံ (C): UY
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Montevideo
Kingdom Rush Vengeance APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ